Subbly: Vhura Yako Inyore Bhokisi Revhisi Neiyi Ecommerce Platform
Muvhuro, April 19, 2021 Muvhuro, April 19, 2021 Douglas Karr
Imwe hasha huru yatiri kuona muecommerce ndeyekunyorera bhokisi zvipiriso. Vanyoreri mabhokisi chipo chinonakidza… kubva kumakiti ekudya, zvigadzirwa zvedzidzo yevana, kune imbwa dzinobata… makumi emamirioni evatengi vanonyorera kumabhokisi ekunyorera. Kugadzikana, kusarudzika, ruzivo, kushamisika, kusarudzika, uye mutengo zvese hunhu hunotyaira kunyorera bhokisi rekutengesa. Pamabhizimusi ekugadzira ecommerce, mabhokisi ekunyorera anogona kupa mari nekuti unoshandura vatengi venguva imwe chete kuti vadzokere vatengi. Iko kunyorera eCommerce musika yakakosha
MakeWebBetter: Vaka uye Ikure Yako Ecommerce Bhizinesi neWooCommerce uye Hubspot
Mugovera, January 9, 2021 Mugovera, January 9, 2021 Douglas Karr
Iko hakuna kusahadzika kusvika kure kweHubspot seCRM uye yekushambadzira otomatiki chikuva uye WordPress seContent Management System. Nekuti iri nyore plugin uye wedzera-on, WooCommerce yanga ichikura mukuzivikanwa se ecommerce chikuva kuti iite nyore. Ipo WordPress yaburitsa iri yayo CRM, chikuva chinoshaya kukura kweHubspot nekuda kwekugona kwayo kutyaira maitiro kune ekuwana uye ekuchengetedza matipi esangano. Hubspot inodhura yekubatanidza ye